2way 4way Solar Cable Clip Stainless Wire uqinisa for Ufakelo Solar Ukunyuka
I-2way Solar Cable Clip SUS Panel Clamp isetyenziselwa ulawulo lwentambo yelanga, ekwabizwa ngokuba ziintambo zekhebula zensimbi ezingenanto, iiklip zeepaneli zelanga.
Isinxibelelanisi seMC4 Isinxibelelanisi soThuli sokuTywina iTywina sisetyenziselwa i-MC4 isinxibelelanisi selanga eyindoda nebhinqa, ukukhusela iiplagi ze-MC4 kunye neeadaptha kuthuli nakumanzi kwi-inverter yelanga nakwiinkqubo zelanga.
I-10A 20A 30A 12V 24V ye-PWM eyiNtloko yoMlawuli weNtlawulo yeLanga
I-10A 20A 30A 12V 24V ye-PWM eyiNtloko yeCharge Controller sisixhobo sokulawula esizenzekelayo esisetyenziswa kwinkqubo yokuveliswa kwamandla elanga, elawula uluhlu lweeseli ezininzi zelanga ukuhlawulisa ibhetri kunye nebhetri ukunika amandla umthwalo we-inverter yelanga. isilawuli licandelo lolawulo olusisiseko lwenkqubo yonke yokuhambisa umbane we-photovoltaic.
I-2P 4P 30mA 100mA 300mA 16A 32A 40A 63A I-ELCB RCCB RCD eseleyo yokuPhuka kwesekethe
I-RCB RCCB yi-Residual Current Circuit Breaker, i-ELCB yi-Earth Leakage Circuit Breaker, esebenzayo kwiisekethi zombane ezinombane olinganisiweyo we-230 / 400V AC, frequency 50 / 60Hz kunye nokulinganisa okwangoku ukusuka kwi-16Amp ukuya kwi-125Amp.
I-RCCB ELCB RCD ibonelela ngokhuseleko olungangqalanga kumzimba womqhubi phantsi kwemeko enjalo yokuba iindawo eziphilayo eziveziweyo kufuneka ziqhagamshelwe kwipali efanelekileyo yomhlaba.I-RCCB ikwabonelela ngokhuseleko kumngcipheko womlilo obangelwe sisiphoso somhlaba ngoku ngenxa yokusilela kokusebenza kwesixhobo sokukhusela esingaphezulu ngoku.
I-IP66 yokuSasazwa kweBhokisi yeBhokisi yeSekethe yokuBala yokuBiyelwa kweMozulu
Ibhokisi yokuSasazwa kwamandla ye-IP66 yeSekethe yeBhokisi yoKhuseleko yokuBiyelwa kweMozulu yindawo ebaluleke kakhulu kuyo nayiphi na into yokufakwa kwelanga, ukuba usebenzisa i-DC yesekethe yesekethe njengendawo yokuzihlukanisa.Le Bhokisi yokuHanjiswa kwe-IP66 yenzelwe ukulungiselela amalungiselelo e-DIN oomatshini bokuhamba ngesitimela abagqibeleleyo abagqityiweyo Ikwanokungena ngentambo okuphezulu, ezantsi nangasemva.
I-1000V yeSola yangaphandle yoKhuselo lwaMandla kwisiXhobo seArrester DC SPD
I-1000V yeSola yangaphandle yoKhuselo lwaMandla kwisiXhobo seArrester DC SPD (ngamafutshane i-DC SPD, alias, surge suppressor, surge arrester) ilungele i-TN-S, TN-CS, TT, IT njl.njl. Xa i-SPD isilele ekonakaleni kobushushu obungaphaya okanye obukhoyo ngoku, ukusilela kokukhutshwa kuya kunceda izixhobo zombane ezahlulwe kwinkqubo yokuhambisa umbane kwaye inike umqondiso wokubonisa, inokuthi ithathe indawo yemodyuli xa inamandla ombane kwiiNkqubo zeSolar PV.
I-1000V 32A ye-DC engenaManzi Isolator Tshintshela i-SISO yeSolar PV Array
I-1000V 32A i-DC engenaManzi Isolator Tshintshela i-SISO yeSolar PV Array ziyilelwe ngokukhuselekileyo engqondweni Kwiifom ezizimeleyo nezivalelekileyo, olu luhlu lokutshintsha lunokutshixeka kwaye lufumaneke ukuze luyenze ifaneleke nakweyiphi na imfuneko yokwahlulwa kombane, njengokulungiswa, ukufakwa kwesondlo kunye nokuhlolwa .
I-AC Miniature Breaker Breaker 63 Amp 1P 2P 3P 4P AC MCB
I-AC Miniature Breaker Breaker 63 Amp 3 Isigaba seMBB siyilelwe ukubonelela ngokhuseleko olugqithisileyo ngaphakathi kwizixhobo okanye izixhobo zombane, apho ukhuseleko lwesebe sele likhuselekile okanye alufuneki. Izixhobo ziyilelwe ulawulo lwangoku (AC) lokulawula usetyenziso lweesekethe kwiiNkqubo zaMandla eSolar.